घर » डाटा सुरक्षा नीति
हामी तपाईंको गोपनीयताको कदर गर्छौं। तपाईंको गोप्यता सुरक्षित गर्नको लागि, हामी तपाईंलाई हाम्रो अनलाइन जानकारी अभ्यासहरू र तपाईंको डेटाको सङ्कलन र प्रयोगको सन्दर्भमा तपाईंसँग छनोटहरू बारे जानकारी गराउन चाहन्छौं। हामी यो सूचना हाम्रो वेबसाइटमा र सबै ठाउँहरूमा उपलब्ध गराउँदैछौं जहाँ व्यक्तिगत डेटा अनुरोध गर्न सकिन्छ ताकि यो फेला पार्न सजिलो होस्।
Google Adsense र DoubleClick DART कुकीहरू
यो वेबसाइटले विज्ञापनहरू सेवा गर्न Google, तेस्रो पक्ष विज्ञापन प्रदायकबाट कुकीहरू प्रयोग गर्दछ। Google ले यो वेबसाइट र इन्टरनेटमा अन्य वेबसाइटहरू भ्रमण गर्ने मानिसहरूलाई विज्ञापनहरू प्रदान गर्न DART कुकीहरू प्रयोग गर्दछ।
तपाईंले निम्न ठेगानामा गएर DART कुकीहरूको प्रयोगलाई निष्क्रिय पार्न सक्नुहुन्छ: http://www.google.com/privacy_ads.html। प्रयोगकर्ता आन्दोलनहरू DART कुकीहरू मार्फत ट्र्याक गरिन्छ, जुन Google को गोपनीयता नीतिको अधीनमा छन्।
कुकीहरू तेस्रो पक्ष विज्ञापन सर्भरहरू वा विज्ञापन नेटवर्कहरूले यस वेबसाइटमा प्रयोगकर्ताहरूको गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी सङ्कलन गर्न प्रयोग गर्छन्, उदाहरणका लागि। B. कति जनाले तपाईको वेबसाइट भ्रमण गरेका छन् र उनीहरूले सान्दर्भिक विज्ञापनहरू देखेका छन् कि छैनन्। Instazoom.mobi यी कुकीहरूमा पहुँच वा नियन्त्रण छैन, जुन तेस्रो पक्षहरूले प्रयोग गर्न सक्छन्।
व्यक्तिगत जानकारी संकलन गरिन्छ।
यदि तपाईं instazoom.mobi भ्रमण गर्नुहोस्, वेबसाइटको आईपी ठेगाना र पहुँचको मिति र समय रेकर्ड गरिएको छ। यो जानकारी केवल ढाँचाहरू विश्लेषण गर्न, वेबसाइट व्यवस्थापन गर्न, प्रयोगकर्ता आन्दोलनहरू ट्र्याक गर्न र आन्तरिक प्रयोगको लागि सामान्य जनसांख्यिकीय डेटा सङ्कलन गर्न प्रयोग गरिन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, रेकर्ड गरिएका IP ठेगानाहरू व्यक्तिगत जानकारीसँग जोडिएका छैनन्।
हामीले तपाईंको सुविधा र सन्दर्भको लागि यस वेबसाइटमा लिङ्कहरू प्रदान गरेका छौं। हामी यी वेबसाइटहरूको गोपनीयता नीतिहरूको लागि जिम्मेवार छैनौं। तपाइँ सचेत हुनुपर्दछ कि यी वेबसाइटहरूको गोपनीयता नीतिहरू हाम्रो भन्दा फरक हुन सक्छ।
यो कथन हाम्रो विवेकमा कुनै पनि समयमा अद्यावधिक गर्न सकिन्छ। यदि तपाइँसँग गोपनीयता नीतिको बारेमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने instazoom.mobi कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् [ईमेल सुरक्षित]
© 2021 - 2022. सबै अधिकार सुरक्षित - instaZoom.Mobi